Acquire.io: Otu Njikọ Aka na Ndị Ahịa | Martech Zone
Ndị ahịa bụ oke mkpa azụmaahịa ọ bụla. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ole na ole nwere ike ịkwado ihe ha na-agbanwe, na-ahapụ nnukwu ohere nke ụlọ ọrụ ndị dị njikere itinye ego na ahụmịhe ndị ahịa ma melite oke ahịa ha.
N’amaghi anya, njikwa CX abụrụla ihe kachasị mkpa maka ndị isi azụmaahịa na-ewepu akụnụba na-aba ụba iji nweta ya. Agbanyeghị, na enweghị ezigbo teknụzụ, ọ gaghị ekwe omume ị nweta ọkwa nke onwe na ahụmịhe nke ndị ahịa nke oge a chọrọ. Dika nyocha Adobe, ulo oru ndi n’enye aka na ndi enyi ha nwere a Ọganihu 10% YOY, a 10% mmụba na nkezi iji uru, na a 25% abawanye na nso udu.
E wezụga na-atụ anya otu larịị nke ọrụ gafee multiple touchpoints, ụzọ ndị ahịa chọrọ ka a na-arụ na-agbanwe agbanwe, na 67% na-ahọrọ ọrụ onwe onye ịgwa ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ okwu. Na mkpokọta, ọsọ na mma ka bụ isi nkuku nke ndị ahịa na-arụ ọrụ nke ọma. Ndị ụlọ ọrụ na-aghọta nke a na-ebute teknụzụ ndị na-akwalite elele ndị a karịa ịnabata teknụzụ naanị maka ịchachacha, akụkọ PwC.
Acquire.io Nlekọta Ndị Ahịa Ahịa
Nweta na-enye usoro ọrụ akpaaka ndị ahịa na-akwụ ụgwọ dị ka ị na-aga nke na-eme ka nkwukọrịta ọkụ ọsọ ọsọ, ịrụ ọrụ nke ọma, na ezigbo oge, na-eduga ndị ọrụ nwere obi ụtọ na ndị ahịa afọ ojuju. E wezụga atụmatụ bara ọgaranya, sọftụwia ahụ na-enye otu isi iyi nke eziokwu maka mmekọrịta ndị ahịa niile ka ị nwee ike ịza ajụjụ site na otu dashboard na-enweghị atụfu egwu.
Ebumnuche a na-eji arụ ọrụ akpaaka ndị ahịa na-ebugharị nkwukọrịta gafee usoro ndụ ndị ahịa ma nwee ike ịnweta ahụmịhe nke ọnụ ọgụgụ na-enweghị ihe nrụpụta IT dị mgbagwoju anya ma ọ bụ were nnukwu ndị agha nke ndị ọrụ ahịa.
Ihe nnweta a bu ezigbo ihe eji enyere ndi ahia aka dika oku vidio, nkata nkata, oku na SMS, ozi oku, oku VoIP, cobrowse na uzo na nkata. Nke ahụ abụghị ihe niile - ikpo okwu na-abịa na nchịkọta nchịkọta iji tụọ ma nyochaa data ndị ahịa gị maka nghọta miri emi, ịhazi onwe gị, na ịkọwapụta profaịlụ ndị ahịa na-akpaghị aka. Enwekwara isi ihe omuma banyere ihe omuma iji hazie ihe ndi na eche gi ihu na ndi ozo ka ha nyere ndi ahia aka idozi ajuju ha, me ka onu ahia ndi ahia gi kwalite na itinye aka ha.
Ikpo okwu na-eme ka ndakọrịta nchọgharị na-enye 50 + njikọta, nke pụtara inweta Nweta nwere ike iji njikọ gị na akụrụngwa IT dị ugbu a dị ka ire ahịa gị, nkwado gị, mmekọrịta gị na ndị ọzọ, yana ngwa SSO maka mmekọrịta na-enweghị ntụpọ na echiche data dị n'otu.
Nweta ndị otu ụlọ ọrụ ji ngwa ọrụ dijitalụ niile achọrọ iji dozie ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche site na ịkọwa mkparịta ụka ndị ahịa maka ire ahịa, nkwado, na ịbanye. Ọ na-enye ndị ọrụ nkwado ndị ahịa gị otu setịpụrụ nwere ike ịda, enweghị nbudata, yana ngwaọrụ mmekọrịta iji duzie ndị ahịa na ntanetị yana ngwa-oge.
Ndị otu gị na-enweta interface ọrụ dị mfe ma na-enweghị nghọta nke na-enye ha echiche dị n'otu banyere onye na-eleta, ogologo oge ka onye ọrụ na-eche, yana nkọwa ndị ọzọ gbasara ndị ọrụ sitere na sọftụwia jikọrọ ọnụ na akụkọ nchọgharị. Ikpo okwu a na-edekọ ndekọ nke akụkọ nkata ma na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na nkọwa nchịkọta post-nkata iji nye ndị otu na ndị nlekọta njikwa njikwa mkparịta ụka ndị ahịa. Fọdụ n'ime ihe ndị a kacha hụ n'anya maka inweta otu njikọ aka ndị ahịa gụnyere:
1. Ndụ Nkata
A na-amata nkata ndụ iji mee ka ndị ahịa na-emekọrịta ihe site n'ịhụ nkwado oge, nke na-emekwa ka ntụkwasị obi ndị ahịa na ntụkwasị obi ha, na-eduga n'ịlaghachi ahịa.
Nweta nkata ndụ enwere ike iji ya mee ihe na enweghị nhịahụ gafee ọtụtụ ngwaọrụ, ihe nchọgharị, na ọwa dijitalụ iji hụ na nkwado ndị mmadụ chọrọ maka ndị ahịa n'oge awa ọrụ.
Ndị ahịa nke oge a, ndị ahịa ejikọtara ọnụ na-achọ elebara anya 24/7, nke enwere ike ime site na itinye chatbot na mpaghara gị dijitalụ. Okpukpo a na - enweta Achọpụta na - enye gị ohere ịmepụta nkata chat maka akara gị na - enweghị koodu ọ bụla. Naanị họrọ ebumnuche bot gị wee wuo arụmọrụ ọdịnala iji zaa ajụjụ ugboro ugboro na-akpaghị aka, 24/7, na-enweghị ibu ọrụ ndị ọrụ nkwado gị.
Ma ọ bụ ihe ngosi miri emi nke ngwaahịa ma ọ bụ na-eweta nsogbu nsogbu siri ike, Nweta ikpo okwu na-enye gị ohere ịlele ma soro ndị na-eme nchọgharị gị ihe na-eji akara ngosi. nkpokọta teknụzụ. Akụkụ kachasị mma gbasara Nweta cobrowsing bụ na ọ chọghị nkwụnye ma ọ bụ budata na njedebe ọ bụla ma enwere ike ịmalite ya n'otu ntabi, na-eme ka usoro ahụ dị ngwa, enweghị nsogbu, na ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ.
4. Ihe omuma ihe omuma
Ihe ikpo okwu na-abia na ngwanrọ ngwanrọ nke inbuilt iji nakọta ma hazie ihe enyemaka ndi ahia na-eche ihu na ndu na-agbasawanye ma na-adighi mfe. E wezụga iwulite ihe enyemaka onwe gị, Nweta plọg na ozi a n'ime nkata gị na-ebi ndụ, weghara ihe ndị ị chọrọ, yana isiokwu na-atụ aro akpaaka iji nyere aka aka akpaka maka nsogbu dị mgbagwoju anya na-enweghị mkpa ndị ọrụ ndụ ọ bụla.
5. nnabata Igbe mbata
Ọ dị mfe ịnwe ọtụtụ ọwa nkwukọrịta ma tufuo mmekọrịta mmekọrịta ndị ahịa. Agbanyeghị, inweta nnweta azụmaahịa ndị ahịa na-edozi ihe ịma aka a site na ịnye ndị ọrụ gị igbe igbe ozi jikọrọ ọnụ nke na-ejikọ nkwado email gị yana ndị ọzọ na-akwado nkwado gị iji mepụta otu iko nke iko maka mmekọrịta ndị ahịa niile. Ihe si na ya pụta bụ obere ọgba aghara na ọgba aghara - ebe ndị ọrụ gị nwere ike ịlele njikọ ndị ahịa niile, gụnyere ozi ịntanetị, n'otu usoro iheomume oge maka ndị ahịa, ma zaghachi ozi ịntanetị site na otu dashboard dị ka nkata ndụ, mgbasa ozi mmekọrịta, VOIP, SMS, na ndị ọzọ.
6. Nkata vidiyo
Ọ bụ eziokwu na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa na-ahọrọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọkachasị mgbe ha na-emeso nsogbu dị mgbagwoju anya ma ọ bụ azụmahịa azụmahịa. Nweta usoro ntinye aka nke ndị ahịa gụnyere atụmatụ vidiyo na-akparịta ụka nke na-enye gị ohere ijikọ ndị ahịa gị, ihu na ihu, site na ikpo okwu nkwukọrịta kachasị amasị ha n'otu pịa site na Acquire dashboard.
Akụkụ kachasị mma banyere njirimara nkata vidiyo ahụ bụ na ọ chọghị ntinye ma na-enye ohere ma otu ụzọ na ụzọ nkwado vidiyo abụọ, yana ndekọ vidiyo. SDK a na-eji agagharị agagharị pụtara na ị nwekwara ike ịhazi ahụmịhe vidiyo nke mkpanaka gị na ntanetịime ihe ọmụma efu.
Ihe Nlere nke Ahịa nke Enyere Aka Site Nweta Platform Nkwado Ndị Ahịa n'oge Ọrịa Na-efe efe
The Otu Dufresne, onye Premier Canada na-ere ahịa ụlọ, mejuputa Nweta vidiyo nkata maka ndozi ụlọ ka iweda ụgwọ mmezi arịa ụlọ ha ma melite njikọ ndị ahịa ha n'ịntanetị. Site na itinye vidiyo enweta, ndị otu ahụ gbanwere nleta ụlọ mbụ na nyocha vidiyo nke belata ọnụ ọgụgụ nke nleta ụlọ na ọkara ma mekwaa ọsọ ọrụ ahụ nke ukwuu. Na nwute, mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-anụ ụtọ ọganiihu ya, ọdachi ahụ dakwasịrị na 2020, na-eweta ihe ịma aka ọhụrụ na nhịahụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị ọbịa nọ n'ụlọ ahịa na-ere ihe ụlọ.
Ngwọta ahụ dabara na oge Eureka nke dugara ndị otu ahụ ka ha tinye nkata vidiyo maka ahịa site na iji usoro nnweta. Mgbakwunye nke nkata ndụ na 24/7 bot na-eme ka mgbasa ozi ahịa onwe ya kawanye mma ma kwadoro ya, na-eduga na njikọ aka na ahịa dị elu. Site na iwebata njegharị vidiyo maka arịa ụlọ na itinye teknụzụ na-emekọ ihe ọnụ iji mepụta ahụmịhe ụlọ ahịa ahụ, onye na-ere ahịa nwere ike ịkọwa ụdị ụlọ ahịa ahụ na ahịa ịntanetị na-enweghị mgbakwunye ma ọ bụ ọzụzụ ọzọ.
Can nwere ike ịgụ ihe ọmụmụ ahụ ma ọ bụ dozie ngosi iji hụ otu esi nweta nwere ike ịgbanwe azụmahịa gị site na ị na-arụ ọrụ ndị ahịa gị site na iji plọg na egwu egwu.
Gụọ Ọmụmụ Ihe Nweta Akwụkwọ nweta Nweta
Tags: nweta.iookunkatankpokọtaahịa nkwadoOtu Dufresneihe ọmụmankata ndụịnyịnyasalesnnabata inboxSMSsupportoku vidiyoVoIP
Dhruv Mehta bu onye ahia ahia ahia ma na-enye azịza na oge dijitalụ. N'oge ya n'efu, ọ hụrụ n'anya ide ihe na teknụzụ na ahịa. Ọ bụ onye na - eweta onyinye na Tweak Your Biz.